15+ Thuốc diệt Ốc Sên gốc tự nhiên có lợi cho cây trồng | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
15+ Thuốc diệt Ốc Sên gốc tự nhiên có lợi cho cây trồng | Excitinghochiminhcity
Hozhwa vanodya mashizha, kunyanya mashizha madiki akasvibira, anorara nekukurumidza kana kwanaya. Hozhwa dzinowanzokambaira kuti dzidye zvakanyanya usiku, masikati dzinowanzohwanda zvakanyatsonaka.
Kugona kwavo kuparadza kunokurumidza kwazvo mumazuva mashoma, saka kana pasina nzira yekudzivirira yakakodzera nguva, inokuvadza zvirimwa zvakanyanya.
1 Hunhu hunokuvadza hwehozhwa
2 Kuuraya hozhwa neriva
2.1 1. Bata hozhwa neriva remavise
2.2 2. Uraya hozhwa nemateya edoro
2.3 3. Ropa hozhwa nemvura yeCoca
2.4 4. Musungo wehozhwa ine peel yeorenji
2.5 5. Mimwe miteyo yehozhwa yakafanana
3 Kubvisa sei hozhwa
3.1 1. Shandisa control bark uye sawdust
3.2 2. Shandisa nzvimbo yemvura nekofi
3.3 3. Shandisa ivhu re diatomite
3.4 4. Mwaya lime poda
3.5 5. Kushandisa mhangura
3.6 6. Shandisa gariki
4 Hozhwa mushonga unokosha
5 Matanho ekurima ekudzivirira hozhwa
Hunhu hunokuvadza hwehozhwa
☑ Hozhwa imhando yemoluska (mollusks), dzimwe dzine matemhe dzimwe hadzina. Musoro une matende maviri (ndebvu), muviri wese wakafukidzwa neruzevha.
☑ Semhuka dzesango, munguva yekupisa dzinowanzochera pasi, dzinovanda mumakomba, dzinohwanda pasi pemashizha, makwenzi kana pasi pehari.
☑ Munzvimbo yadzinogara munguva yekupisa, vanogona kurara kwemwedzi yakawanda, asi zvinongoda mvura yekugeza (kazhinji muchirimo) kuti vashande zvakanaka.
☑ Hozhwa dzinowanzoda kudya nhengo diki dzezvinomera senge misoro midiki, mashizha achangobva kumera… Mhando mbiri dzelotus refu uye isina bare sezviri kuratidzwa pamufananidzo ndidzo dzakanyanya kuoma kurapa, nekuda kwenhamba yakakura uye yakaoma kuona. .
Kuuraya hozhwa neriva
Iyi nzira inoshanda kumagadheni madiki emuriwo, kukura kwemuriwo wemhuri, kune maslugs asina chinhu uye madiki akavharirwa marudzi.
1. Bata hozhwa neriva remavise
Izvi zvinobatsira kubata hozhwa pasina kudziuraya. Kana uri murimi usingade kuuraya, unogona kushandisa nzira iyi kubata hozhwa wodzisunungura kumwe.
Danho 1: Cheka rind remuvise kuita zvidimbu diki zviripakati nepakati, rind rinofanira kuva nenyama tsvuku inotapira kuti ikwezve hozhwa.
Danho rechipiri: Isa rindi remavise pasi pemuriwo kuitira kuti pasi pegovi rienzane nepasi, kuti hozhwa dzinyanye kukwira. Nekuti hozhwa dzinogona kungonhuwa chikafu mumutsara wakamanikana, zvinodikanwa kuisa akawanda mavhoti pods.
Inofanirwa kuseta hozhwa musungo masikati anotonhorera, angangoita 16-17h.
Danho rechitatu: Enda kunze na9pm kuti utarise kushanda kwemusungo, kana pane hozhwa, unogona kuunganidza, wozodzorera mavise emvura kuti ateye zvakare. Unogonawo kuunganidza hozhwa mangwanani, asi unofanira kumuka mangwanani, kana wanonoka, hozhwa dzinokambaira kure.
READ Ý nghĩa Cây Lưỡi Hổ và những tác dụng ấn tượng | Excitinghochiminhcity
Cherechedza: Zvidimbu zvemavise zvichiri zvakanaka zvinogona kuchengetedzwa kuti zvizoteyiwa zvakare. Nzira yekukurumidza kuunganidza hozhwa ndeyekunyika zvimedu zvemavise mumvura, zvinozoparadzana zvega.
2. Uraya hozhwa nemateya edoro
Iyi nzira inobatsira kuteya nekuuraya hozhwa, shandisa chero mhando yedoro uye nzira yacho iri nyore.
Danho 1: Shandisa ndiro diki (rudzi rwesoso) rakaiswa pakatenderedza muriwo kuitira kuti ndiro ienzane nevhu kuitira kuti hozhwa dzipinde nyore nyore.
Sezvo hozhwa dzichifemba chete munzvimbo yakamanikana, ndiro dzakawanda dzinoda kuiswa.
Danho rechipiri: Dururirai doro mundiro inenge 1/2 kusvika 2/3 yendiro. Inofanirwa kubata masikati anotonhorera kubva 16-17h.
Danho rechitatu: Manheru, unogona kubuda kuti uone kana musungo uchishanda, unganidza ma discs mangwanani, kumirira kusvika masikati kuti uise musungo zvakare.
Cherechedza: Musashandisezve doro rakavharirwa nekuti raderedza kunaka kwaro uye harichanakidze hozhwa.
3. Ropa hozhwa nemvura yeCoca
Hozhwa sezvihwitsi uye kunhuhwirira, saka Coca anovawo chinangwa chavo. Tinoteya zvakare hozhwa dzakateyiwa nedoro-rakafanana necoca. Asi izvi zvinoshanda kune hozhwa huru.
Danho 1: Isa mbiya hombe kuseri kwebindu, kuitira kuti mbiya ienzane nepasi kuitira kuti hozhwa dzikwanise kupinda mukati.
Danho rechipiri: Dururira yepakati coke 1/2 kusvika 2/3 ndiro. Nguva yakanakisa yekudira coke manheru (kwangosviba).
Danho rechitatu: Mangwanani anotevera, unganidza hozhwa dzakabatwa.
4. Musungo wehozhwa ine peel yeorenji
Maitiro ekuzviita akafanana neari pamusoro, saka ini handichada mirairo chaiyo. Kana orenji rachekwa nepakati, rosvinwa kuti riwane muto, richisiya svuura nefiber mukati, rinoshandiswa kuisa mubindu remuriwo kuti muromo weganda reorenji rienzane nepasi kuitira kuti hozhwa dzipinde mukati. .
Anofanira kusarudza sweet maranjisi, hozhwa kufanana navo nani. Isa misungo manheru, unganidza pakati pehusiku kana mangwanani-ngwanani. Iyi nzira inoshanda kune snails isina chinhu uye zviduku zviduku.
5. Mimwe miteyo yehozhwa yakafanana
Misungo yesnail maererano nenzira uye nguva yakafanana, chete zvinhu zvinoshandiswa zvakasiyana. Naizvozvo, kana ukapa mirairo yese, zvinotora nguva yakawanda.
Mukuwedzera kune nzira 4 dzakaratidzwa pamusoro apa, unogona kutsiva zvinhu zvemusungo necucumber, mashizha ehibiscus, peel uye fiber yejackfruit, uchi … izvi zvose zvinonyanya kunakidza zvigadzirwa zvehozhwa.
Imwe nzira yekubvisa hozhwa ndiko kukurudzira dzimwe mhuka dzinodya mubindu kuti dzidye hozhwa. Mhuka idzi dzinosanganisira matatya uye matatya aunogona “kukoka” mubindu rako nedzimba dzeceramic toad.
READ Ý nghĩa hoa thủy tiên - Loài hoa thanh tao và sang quý | Excitinghochiminhcity
Mukuwedzera kune shiri dzakawanda (kunyanya robin), turtles, nyoka dzine mitsetse, uye salamanders dzinozivikanwawo kunakidzwa nekudya hozhwa.
Kubvisa sei hozhwa
Pamusoro pekuisa misungo yekubata hozhwa kana kushandisa mishonga inouraya zvipembenene, unogona kushandisa imwe nzira yekudzichengeta kure nezvinomera.
Zvisinei, nzira idzi kazhinji hadzisi dzakanyatsonaka, kune rumwe rutivi, hadzisi kushanda kune bonsai pots, nokuti iyi inzvimbo yejeri, saka hozhwa hadzizozivi kwadzinofanira kuenda, dzicharamba dzichivanda kumativi ose.
1. Shandisa control bark uye sawdust
Mazai, mushure mekushandiswa, anounganidzwa, akaputsika kuita zvidimbu, uye anosaswa pasi pasi pechitsiko chemuti. Magoko emazai ane micheto yakapinza uye anoshatirisa miviri yehozhwa yakapfava, saka anodzivirira kufamba nemumateko kuti akwire mumiti.
Kwete izvozvo chete, goko rezai rinewo calcium, saka rinova fetiraiza inovaka muviri kuvhu. Sawdust ine mhedzisiro yakafanana.
2. Shandisa nzvimbo yemvura nekofi
Tora mvura yekofi yakatonhodzwa mubhodhoro rekupfapfaidza wobva wamwaya zvakananga pamashizha, pasi, kunyangwe hozhwa.
Nzvimbo dzekofi dzakaraswa dzinosaswa zvakapoteredza pasi pemuti uye pasi kuti iwedzere kudya kune ivhu. Iyi ndiyo nzira yekudzinga uye Kuparadza hozhwa yakatsvakurudzwa neUnited States Department of Agriculture.
3. Shandisa ivhu re diatomite
Diatomite ivhu idombo rehupfu kubva kufossilized marine microorganisms. Ichi chinhu chine tumicheto tunopinza uye chinokuvadza kumollusks.
Diatomite ivhu rinogona kusaswa pasi rakatenderedza chirimwa nemibhedha yemaruva. Zvisinei, kushanda kweiyi nzira kuchaderera kana pasi panyorova, saka unofanira kusasa mutsva wevhu re diatomite mushure mekudiridza zvirimwa kana kuti mvura yanaya.
Uye iwe zvakare unofanirwa kuterera kutenga iyo chaiyo mhando ye diatomite chikafu, chisina chepfu.
4. Mwaya lime poda
Paridza lime poda pasi, zvirimwa zvehari kana pamusoro pehari pedyo nechepasi pemuti, kuparadzira 2-3 nguva pamwedzi.
Iwe unogona zvakare kushandisa munyu, asi munyu wemunyu unogona kukanganisa zvirimwa, saka chenjera.
5. Kushandisa mhangura
Nekuda kwekuita pakati pesimbi uye mucus (viscous) nekuda kwe hozhwa yakavanzika kana ichifamba. Mhinduro iyi inoburitsa tsinga yemagetsi isingafadze hozhwa, zvakangoita semagetsi, saka inokwanisa kudzinga hozhwa zvakanaka.
Kuita: Tenga mupumburu wetepi yemhangura panzvimbo inochengeterwa miti woiputira pabindu remuriwo kana mubhedha wemaruva, kana kuti unogona kungoisa mari shoma shoma pazasi pemuti kuti uchengetedzwe.
READ Kỹ thuật trồng cây bí ngô (bí đỏ) cho năng suất cao | Excitinghochiminhcity
6. Shandisa gariki
Ongororo ichangoburwa nemasayendisiti epaYunivhesiti yeNewcastle, UK, hozhwa dzichadonha kubva mubindu rako kana paine zvirimwa zvegariki shoma mubindu. Dr Gordon Port, avo vakatungamira chidzidzo ichi, vakati mafuta egarlic anogona kutouraya hozhwa.
Kunyanya, kana uchisangana negariki, huwandu hweslime nekuda kwe hozhwa secretions kamwe kamwe spike uye “vanoita seane mvura”. Akafungidzira kuti chiitiko ichi chaive chikonzero chemaitiro emafuta egariki achishanda pane hozhwa yetsinga, asi kuedza hakuna kupa humbowo hwakakwana hwekutsigira izvi.
Tora anenge 10 garlic bulbs, kupwanya, kusvina mvura, sanganisa ne 2 makapu emvura. Iyi dose inogona kuchinjwa zvichienderana nekuwanda uye nzvimbo yezvirimwa.
Dururira mubhodhoro rekupfapfaidza uye pfapfaidza pazvirimwa, maruva, nemishonga sechisikigo chinodzinga hozhwa nemaslugs.
Hozhwa mushonga unokosha
Sekureva kwaDr. Nguyen Thi Nhung (Aimbova Musoro weMishonga, Weeds uye Environmental Department – Plant Protection Institute), apo hozhwa dzinoda kupfapfaidza mhando yemishonga, inova mishonga yakanyoreswa zvakanangana nekudzora hozhwa.
Enda kuchitoro uye kumbira kutenga zvinodhaka zvine maitiro anoshanda Cypermethrin kana Caffeine + Nicotine Sulfate + Azadirachtin kana Saponin.
Zvisinei, zvakakosha kutarisa mushonga wakarurama wakanyoreswa kunze kwehozhwa, nokuti mimwe mishonga ine zvinhu zviri pamusoro apa inoshanda asi isina kunyoreswa kunze kwehozhwa zvakare haishande.
Cherechedza: Kushandisa mishonga kuuraya hozhwa kunongoshanda kumapindu makuru emuriwo. Zvisinei, isu hatikurudzire kushandiswa kwemishonga, kana nzira dzehupenyu dzinogona kushandiswa, dzinofanira kushandiswa.
Matanho ekurima ekudzivirira hozhwa
Hozhwa dzinokura mumamiriro ezvinhu akaoma, kushayikwa kwechiedza, ivhu rakanyorova… Naizvozvo, garai chengetedza bindu rine mhepo uye rakaoma. Izvo zvakare zvinokwanisika kumwaya lime poda kutenderedza groove yemubhedha wemuriwo.
1. Shandura purogiramu yekudiridza
Do hozhwa Inofarira ivhu nyoro sezvo dzichifamba zviri nyore uye nekukurumidza paivhu nyoro.
Saka ingochinja nguva yekudiridza kusvika mangwanani pane kunonoka masikati kana manheru, unova nechokwadi chekuti ivhu rakaoma zvishoma kusati kwadoka.
Izvi zvichaita kuti zvinyanye kuomera kuti hozhwa dzifambe, uye dzinogona kudzikisira chimiro chadzo kusvika pa80%.
2. Chenesa marara pasi pemuti
Hozhwa Vanoda kuhwanda mumanoki nemakorokoza avanogona kuwana, saka unofanira kuchenesa marara pasi pemiti nemaruva. Nenzira iyi hozhwa ichafumurwa uye haichadi kugaramo.
3. Kura zvinomera zvinodzinga hozhwa
Kune zvimwe zvinomera, maruva, nemishonga zvinozivikanwa kuti zvinogumbura hozhwa, saka ungada kufunga kuzviwedzera kubindu rako. Pakati pavo pane maruva akadai se freesia, dandelion, rhododendron, foxglove, chrysanthemum, hibiscus, mishonga yakadai semint, rosemary, dill, parsley uye basil.
4. Gara uchirima ivhu rakatenderedza muti
Izvi zvinoparadza mazai ose ehozhwa muvhu. Izvi zvinogona kuderedza huwandu hwehozhwa gare gare.
5. Wedzera zvinhu zvekushongedza
Shandisa zvinhu zvekugadzira nyika zvakaita sehuni machipisi nematombo. Zvimwe zvinhu zvakadai semachipisi, matombo, nejecha zvinoita kuti zviomere kukwira hozhwa uye zvinogona kudzidzivirira kuti dzisagara mubindu.
Chinyorwa chinonongedzwa kubva kuYouTube chiteshi seQuoc Thinh Le uye Nam Rau
← Top 4 các hãng taxi Mỹ Tho | Excitinghochiminhcity
Tìm hiểu vị trí địa lý, đặc điểm nổi bật của Côn Đảo | Excitinghochiminhcity →